Zon'olombelona · Janoary, 2016 · Global Voices teny Malagasy
Zon'olombelona · Janoary, 2016
Tantara mikasika ny Zon'olombelona tamin'ny Janoary, 2016
Zazakely Teratany Fanahy Iniana Novonoina, Saingy Zara Raha Nahafantatra Ny Fisian'izany i Brezila
Amerika Latina15 Janoary 2016
Andro mialoha ny faran'ny taona, nampinono ny zanany lahy 2 taona ny vehivavy indizeny iray raha indro nisy lehilahy nanatona azy ireo ary namono ilay zazakely. Tsy nahasarika ny saina tao Brezila anefa izany tranga izany.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana13 Janoary 2016
« Tsy fasana ho an’ny tenanay ihany ny ranomasina, fa ho an'ny fahatsiarovanay– sarinay sy ny harenanay ary ny zavatra kely nentinay mba hahatsiarovana ny tanindrazanay ihany koa. »
Ny Toeran'ny Pakistaney Amin'ny Fahatapahana Ara-Diplaomatika Eo Amin'i Arabia Saodita Sy i Iran
"Tokony hiaraka amin'i New Zealand isika amin'ity adi-hevitra hoe Iran sa Saodita ity. Maka ny toerana lavitra indrindra amin'ity resaka ity."
Tsy Ny Disadisa Siriana No Hakàn'izy Ireo Amiko Ny Noeliko
Ao anaty firenena iray anjakan'ny ady dia sady fihetsika tena tsy misy fahamatorana no fanoherana mahery vaika ny fankalazàna Noely.
Raha Manao Dingana Amin'ny Fandroahana i Etazonia, Ireo Mpisolovava Kosa Manosika Ny Hanomezana Sata Mpifindramonina Ho An'ireo Amerikàna Tanivo
Amerika Avaratra11 Janoary 2016
"Tsy maninona raha toa ianao manana antontan-taratasy. Manana zo eto amin'ity firenena ity ianao."
Afrika Mainty11 Janoary 2016
."Tsy iriko, na ho an'iza na ho an'iza aho, eny fa na dia ho an'ny fahavaloko ratsy indrindra aza, ny hiaina amin'izany nofy ratsy izany. Miravirary tanana ny vahoaka malagasy manoloana io andiana fakàna zaza ankeriny io".